Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeNepal Breaking » ENepal: Iphupha lomfoti wesitalato
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Iindaba zeNepal Breaking • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuhamba ngomtsalane yeyona ndawo ithandwayo eNepal ngohambo oludumileyo njenge-Annapurna Circuit, iLangtang kunye ne-Everest Base Camp yokuhamba ukubiza ezimbalwa. Ukuhamba ezi ndlela zidumileyo kutsala ngaphezulu kwe-150,000 yeendwendwe ngonyaka ukuya eNepal. Njengomntu ohambahambayo ungalindela ukuba xa ungena elalini abantwana baya kuphuma bebaleka ukuza kufuna "ifoto enye nceda." Bayayithanda ngokupheleleyo ukuba uthatha ifoto yabo emva koko ubabonise kwiscreen se-LCD yekhamera yakho. Kodwa ayingobantwana kuphela abonwabileyo ukubakho kwiifoto zakho, phantse wonke umntu waseNepal uya kunyanzela isithombe.
Mnumzana! Mnumzana! Ifoto enye, ifoto enye, nceda.
INepal yindawo ekumgangatho ophakamileyo yeentaba zehlabathi, eziqhayisa ngeentaba ezisibhozo kwezilishumi elinesine eziphakamileyo zehlabathi.
Apha ngezantsi kweNtaba enkulu i-Everest, abantu baseNepali bahlala bonwabile kukuthatha iifoto zabo.
Oku kuthetha ngokubanzi kwisimo sengqondo ngokubanzi malunga neendwendwe kunye nobuchule bendalo bokubuka iindwendwe obuchaza abantu baseNepal.
Ukuba uyakuthanda ukufaka iifoto zabantu, uyilo okanye iindlela ezizodwa zendlela, uya kuwathanda amathuba eNepal. Ubukumkani bangaphambili beHimalaya, ngoku eyi-republic ye-demokrasi yindawo ekumgangatho ophakamileyo weentaba, oqhayisa ngeentaba ezisibhozo kwezilishumi elinesine eziphakamileyo zehlabathi kubandakanya iMount Everest, eyona ndawo iphakamileyo eMhlabeni. Kodwa ezantsi eziphakamileyo kukho umhlaba weendlela ezintle nezingafaniyo zokufota ezichasene neefoto zezona zisibhozo zibalaseleyo.
Abantu baseNepali baphakathi kwabona bantu bahlala eMhlabeni kwaye bahlala bonwabile ukuthatha iifoto zabo, ukuba ubabonisile kwikhamera yakho, bayayithanda loo nto. Kujikeleze ezinye zeetempile amadoda angcwele awaziwa njengoSadhu (ngamanye amaxesha uSaadhu) angacela intlawulo yeerandi ezili-100, ezilingana nedola yaseMelika ukuba zikwenzele kodwa abantu abaqhelekileyo onokudibana nabo esitratweni mhlawumbi ngekhe bakubuze nantoni na. . Kuphela nje kuyacaca ukuba ilizwe apho iminyaka emininzi ekungeneni kwibala lemidlalo iDashrath Rangasala, eyona nkundla inemisebenzi emininzi elizweni, bekukho umqondiso othi "Undwendwe nguThixo" okanye kwivesi yesiSanskrit, Atithi Devo Bhawa. Ithetha ngokubanzi kwisimo ngokubanzi malunga neendwendwe kunye nobuchule bendalo bokubuka iindwendwe obuchaza abantu baseNepal, abazenzayo I-Nepal yenye yeendawo eziphezulu "zoluhlu lwamabhakethi".
Ukongeza ukufota "abantu" abaqinisekileyo, kukho iindlela zesitalato eNepal ezingaqhelekanga kwaye zahlukile. Njengomfoti osebenza eNepal, andizange ndiphelelwe yindawo yokufota kwaye nasemva kweminyaka emininzi ndifota iNepal ngalo lonke ixesha ndijika ikona kubonakala ngathi kukho omnye umbono olindele ukubanjwa. Zininzi kakhulu ii-nooks kunye ne-crannies ezilindele ukufunyanwa kwiindawo ezinje ngedolophu elikomkhulu laseKathmandu apho ukukhula okungalindelekanga, kunye nokukhula okungacwangciswanga, kudale umgaqo wendlela wezitalato. Ke ngoko biza iibhetri zakho, fomatha amakhadi akho ekhamera kwaye ulungele abafoti bezitalato iphupha lizaliseka eNepal.
Ukufota esitratweni konke malunga nokubeka izihlangu phantsi kwaye uhambe ngesingqi, kodwa, ngelixa bendikhankanya ukuba izitalato zinokujika ngokukhawuleza zibe yimaze, akukho sidingo sokukhathazeka kwaye ungahamba ngokuzithemba uninzi lwabantu baseNepal impilo-ntle yakho ibe luxanduva lomntu, nokuba badibene nawe nje. Kwiminyaka eliqela eyadlulayo ibhinqa eliselula elalihlala ekhayeni lethu lacinga emva kweyure okanye ukuba lihamba lijikeleza, kwaye labhideka ukuba lithathe ngaphi na eli khaya. Usibizele kwiselfowuni kwaye umfazi wam, ongumNepali uqobo, wamyalela ukuba aye kwivenkile ekufutshane kwaye anike umnxeba kuye nabani na olapho. Ukulandela incoko yemizuzu emihlanu umnini-venkile wayivala ivenkile, wabeka undwendwe olundwendweleyo ngasemva kwisithuthuthu sakhe wasisa emnyango wethu wangaphambili. Olo luhlobo lokubuka iindwendwe oluza kulifumana eNepal. Yindawo apho abantu benganiki nje umkhombandlela, baya kukuhamba buqu ukuya kwindawo oya kuyo.
Phakathi kwamathuba amaninzi okufota kwidolophu elikomkhulu laseKathmandu qiniseka ukutyelela i-Asan Market, apho iivenkile zalapha, iSwayambhunath edla ngokubizwa ngokuba yi "monkey temple," iBoudha Stupa, isitampu sodumo esakhiwe kwinkulungwane ye-14 kwaye saboniswa kwiintengiso ezininzi zokhenketho. yeNepal, kunye nePashupati, igama eliqhelekileyo lePashupatinath Temple, enye yeetempile ezibaluleke kakhulu zamaHindu eMzantsi Asia. Zonke ezi ndawo zibonelela ngamathuba amaninzi kumfoti ohambahambayo. Zininzi iiarhente zokhenketho eziza kuququzelela ukhenketho lokufota esitalatweni, okanye unokubamba nje imephu kwaye uzenzele ngokwakho. I-Kathmandu sisixeko esigcwele inkcubeko kunye nobuhle ngokungafaniyo nayiphi na enye indawo eMhlabeni kwaye kukho amathuba angenamda okufota apho, kwaye ngokunyanisekileyo kuyo yonke iNepal ukusuka kwiindawo eziphakamileyo ze-Everest ukuya eTerai, kumathafa aseNepal apho ikhoyo indawo kaBuddha.
Omnye umfoti wathi ngokufotwa kwezitrato eNepal "yayipholile" kwaye leyo yinkcazo efanelekileyo yezona ndawo zibalaseleyo ezishiyekileyo eMhlabeni.
Iifemu zokuhamba zisebenzisa itekhnoloji ukuzibandakanya ngempumelelo ngakumbi...